नायक कुमार मोक्तानलाई मेगास्टारको उपाधी, कहिले गर्दैछ सम्मान ? - नायक कुमार मोक्तानलाई मेगास्टारको उपाधी, कहिले गर्दैछ सम्मान ? -
नायक कुमार मोक्तानलाई मेगास्टारको उपाधी, कहिले गर्दैछ सम्मान ?
उज्यालो प्रतिनिधि २० कार्तिक २०७८, शनिबार कला/साहित्य
काठमाडौ । नायक कुमार मोक्तानलाई मेगास्टार को रुपमा सम्मान गरिने भएको छ । तामाङ चलचित्र जगतमा १ दशक भन्दा लामो समयदेखी अनवरत रुपमा योगदान दिदै आएका नायक मोक्तानलाई तामाङ चलचित्र क्षेत्रलाई डोर्याउन महत्वपूर्ण भुमिका निभाएका कारण उच्च- मुल्यांकन गर्दै बिरिसु मिडियाले सम्मान गर्न लागिएको हो ।
बिरिसुले आयोजना गरेको स्टार म्युजिक एण्ड फिल्मस अवार्ड २०७८ को टप ५ नोमिनिजहरुको नाम सार्वजनिक कार्यक्रममा उक्त घोषणा गरेको हो। बिरिसु मिडियाले आगामी मङसिर ११ गते अवार्डको फाइनल कार्यक्रम गर्दै छन ।
काभ्रेको रोशि गाउँपालिका साबिक ७ नम्बर वडा चिप्लेमा बुबा देवि सिंह लामा र आमा चन्द्र कुमारीको कोखबाट वि.स २०४१ साल भदौ ८ गते जन्मिएका हुन ।
नायक कुमार मोक्तानले “ह्युलला माया” चलचित्र मार्फत चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु गरेका हुन । उनले हालसम्म मायासे लासी भाग ३ सम्म, दोर्जे डन, ह्युलला कानुन गरि २ दर्जन हाराहारी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन ।
उज्यालो नेटवर्कका अन्य समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
तेस्रो डिशहोम १२ खरी कथा लेखन प्रतियोगिताको प्रथम